Ithegi: ukuthengisa nge-imeyile roi | Martech Zone
Maka: ukuthengisa nge-imeyile
Kutshanje ndiye ndathumela uluhlu lwam lokuthengisa olwenziwe kwi-Intanethi kwaye esinye sezicwangciso eziphambili kukuthengisa nge-imeyile. Ukuthengisa nge-imeyile kusekho ukubuya okuphezulu kakhulu kutyalo-mali, iindleko eziphantsi zokungena, kwaye yenye yeetekhnoloji ezimbalwa zokutyhala ezishiyekileyo kubathengisi ukuba bafikelele kubabhalisi babo bangoku. Imisebenzi yokuthengisa nge-imeyile- sonke siyayazi loo nto kodwa ingakanani imbalelwano yakho ye-imeyile efanelekileyo kumbutho wakho? Ngaba uyayiqonda into
Ndenzeke ividiyo kaTony Robbins kwi-TED eyayikhuthaza kakhulu. Omnye wemigca yakhe uye wavakala uyinyani kum ngokobuqu: Izibonelelo xa kuthelekiswa nokuBanakho kokusebenza yenye yezona zinto zanelisayo endakha ndanayo yayikukuba nguMcebisi woMdibaniso we-ExactTarget. Ngelo xesha, i-ExactTarget yayinonxibelelwano oluncinci lwenkqubo yesicelo (i-API) kodwa abathengi bethu babekhula kubunkunkqele nasekuzisebenziseni. Yonke imihla kwakuyintlanganiso kunye nomthengi owayene